Fursad Gaar ah, Shaqo ka hel Disney Cruises | Maraakiibta Absolut
Fursad gaar ah, shaqo ka hel Disney Cruises
Maria Jose Roldan | | Safarada raaxada, Khadadka Cruise Disney
Qof kastaa wuu ogyahay astaanta Disney iyo wax kasta oo astaanta ay ku jirto. Sawirada, alaabta carruurtu ku ciyaarto, jardiinooyinka dulucda ... iyo waliba safarrada. Disney kaliya maahan abuuraha kartoonnada laakiin waxay ahaayeen goobihii ugu horreeyay ee boqortooyo weyn oo ay carruurta iyo dadka waaweyn ee adduunka oo idil jecel yihiin inay ku raaxaystaan. Disney Cruises ayaa tusaale u ah sida waxyaalo waaweyn loogu gaari karo dadaalka dad badan: shaqaalaha.
1 Ku biir shaqaalaha markabka Disney Cruises
2 Kala duwanaanshaha dhaqanka
3 Horumar joogto ah
4 Wax walba ma sidaas bay u fiican yihiin?
Ku biir shaqaalaha markabka Disney Cruises
Waxaa la asaasay 1998 -kii, khadka Disney Cruise wuxuu caan ku yahay inuu bixiyo adeeg aan caadi ahayn iyo inuu qoysaska u abuuro waaya -aragnimo xusuus leh oo socon doona noloshooda oo dhan. Laakiin si taas loo gaaro, waxaa lama huraan ah in shaqaaluhu ay noqdaan kuwo xirfad leh oo ay ku shaqeyn karaan xamaasad iyo hamuun si ay carruurta iyo dadka waaweynba u helaan waqti fiican.
Shaqaaluhu waxay siiyaan fiiro gaar ah dhammaan macaamiisha taasna waxay ka dhigaysaa farqiga u dhexeeya safarrada kale ee mowduucan leh. Waxay rabaan inay dadka dareensiiyaan wax gaar ah laga bilaabo marka ay fuulaan waana sababta ay ugu muuqato in dadku ku celceliyaan waayo -aragnimada. Ka shaqaynta markab dalxiis waxay u baahan tahay dadaal badan iyo ka warhayn inay jiri doonaan daqiiqado shaqo adag, laakiin marka lagu daro waxay sidoo kale bixin doontaa waaya -aragnimo abaal -marin leh, mushahar tartan iyo tababar si kor loogu qaado xirfad ahaan. Ka shaqeynta Disney Cruises waa sida tan: shaqo adag iyo abaal marin.
Waxaa jira dad badan oo haysta jinsiyado kala duwan shaqaalaha doonyaha waxaana loo baahan yahay dadaal kooxeed oo weyn si shaqada loo mideeyo. Tayo, xirfado iyo kartiyo kala duwan ayaa lagu qiimeeyaa shaqada Disney Cruises iyadoon loo eegayn dhalashada dadka.
Waxa la raadinayaa waa isku duubnida kooxda, hubinta in xubnaha shaqaalaha iyo saraakiishu ay yaqaanaan sida loo wada noolaan karo iyo macaamiisha. Waa sida kaliya ee martida loo dareensiiyo in la qiimeeyo iyadoo la sii saadaalinayo baahidooda ... waa inaad mar walba u fiirsataa macmiilka si ay u dareemaan wanaag.
Sababtaas awgeed, shirkadu waxay ka go'an tahay hubinta in shaqaaluhu ay awoodaan inay gaaraan heerar sare iyagoo haysta kooxo kala duwan oo diiradda saaraya khibradda shaqaalaha, iyagoo siinaya aqoonsi gudaha ah iyo taageero shaqsiyeed. Shaqada diyaaradu waxay noqon kartaa mid aad u adag taasina waa sababta ay isku dayaan inay shaqaalaha u dareemaan abaal mar mar kasta oo ay gaaraan ujeedooyinkooda. Maxaa ka sii badan, markaad ka shaqayso markab dalxiis, waxaad saaxiibtinimo la samaysataa xubnaha kale ee shaqaalaha Oo waxaan isku daynaa inaan abuurno jawi shaqo oo aan caadi ahayn si maalin walba markabka Disney Cruise uu u noqdo mid cajiib ah, oo aan ahayn kaliya martida.
Shirkadda khadka tooska ah ee Disney Cruise waxay ku bixiyaan tababarka lagama maarmaanka ah si ay iyagu u gaaraan guul iyaga u gaar ah booska shaqada ee ay haystaan ​​mar walba. Tani waa sababta oo ah waxay rabaan inay ilaaliyaan heerarka Disney oo ay bixiyaan adeeg macmiil oo gaar ah. Haddii aad rabto inaad ku biirto kooxda, waa inaad ka qaybgashaa barnaamijyo tababar oo kala duwan iyo fursadaha horumarkaaga. Waxaad ku bilaabi kartaa caadooyinka ku wajahan Disney laga bilaabo maalinta koowaad.
Markaad tababbarto waxaad awoodi doontaa inaad ballaariso aqoontaada waxaadna dareemi doontaa inaad si fiican ugu diyaargarowday inaad aqbasho dhaqanka saaran oo waxaad ogaan doontaa waxay ka dhigan tahay inaad ka mid noqoto shaqada Disney Cruise. Hadafkiisu waa adiga inaad dareento inaad ka mid tahay qoys aad u fidsan.
Barnaamijka maraakiibta shirkadu waa hal dariiqo oo kaa caawinaya inaad si wadajir ah ula guulaysato shirkadan. Sababtaas awgeed, waxay leeyihiin barnaamijyo kor loogu qaadayo guusha dadka iyo in shaqaaluhu sidoo kale dareemaan mahadnaqa madaxdooda, sababtaas awgeed, waxay siiyaan fursado u gaar ah, oo ay ku jirto inay awood u yeelan karaan inay kor u qaadaan oo ay khibrad uga helaan meelaha kale ee xirfadda gudaheeda isla shirkad. Waxaad awoodi doontaa inaad si toos ah wax uga barato hoggaamiyeyaasha Disney oo aad u weynaato inaad noqoto hoggaamiye. Shirkadda waxay rabaan inaad ku korto, oo aad iyaga kula samayso, si aad u noqoto xirfadle weyn.
Haddii aad go'aansato inaad ku biirto kooxda Disney Cruises, waxaad awoodi doontaa inaad ogaato fikradaha ku xeeran martigelinta iyo adeegga caanka ah ee Disney. Taasi waa sababta aad uga heli karto horumarka meelaha soo socda:
Tababar lagu kobcinayo shirkadda. Waxaad awoodi doontaa inaad wax ka barato caadooyinka iyo qiyamka khadadka Disney Cruise, ogaatid fikradaha soo -dhoweynta iyo adeegga.
Tababar xirfadeed. Waxaad awoodi doontaa inaad hesho tababar looga baahan yahay safarrada caalamiga ah.
Shaqo. Waxay kuu diyaarin doonaan inaad barato shaqadaada, oo leh dhammaan agabyada lagama maarmaanka ah oo la heli karo si aad u awooddo inaad qabato shaqo tayo leh
Tababbarka caafimaadka iyo badbaadada. Waa lagama maarmaan in shaqaaluhu helaan aqoon ku saabsan caafimaadka iyo badbaadada si kooxda oo dhami u ogaato sida looga falceliyo xaalad kasta.
Tababbarka hoggaaminta. Intaa waxaa sii dheer, waxaad ku baran kartaa falsafad shirkad aad u cad: hel xirfado hoggaamineed si aad u hormariso koritaankaaga shaqsiyeed iyo mustaqbalkaaga xirfadeed.
Wax walba ma sidaas bay u fiican yihiin?
Ka shaqaynta Disney Cruises waxay noqon kartaa waayo -aragnimo weyn haddii aad runtii haysato xirfad aad ku shaqayso markab dalxiis. In kasta oo ay u ekaan karto shaqo xilliyeed, xaqiiqadu waxay tahay haddii aad rabto inaad tan ku tababarto, waxaad heli doontaa fursad wanaagsan oo ah koritaan shaqsiyeed iyo mid xirfadeed.
Markaad ka shaqayso dusha, waxay ku xirnaan doontaa adiga iyo aragtidaada inaad ku raaxaysan karto shaqada aad dareento inay kugu badan tahay. Waa inaad maanka ku haysaa in haddii aad ka shaqayso safar dalxiis, waxaad ku jiri doontaa doonnida 24 saac, xitaa maalmahaaga fasaxa ah. Waxaa jiri doona maalmo ay tahay inaad shaqeyso xitaa 12 saacadood maalintii mana yeelan doontid asturnaan dhammaystiran maaddaama ay tahay inaad la wadaagto qolkaaga laba ama saddex shaqaale kale ah.
Ka shaqee maraakiibta dalxiiska
Ka shaqaynta markab dalxiis mar walba maahan mid madadaalo leh waana inaad raacdaa xeerar iyo xannibaadyo badan si shaqadaada si sax ah loo qabto. Sida haddii taasi aysan ku filnayn, waa inaad si fiican ula qabsataa isbeddelada, dalabaadka, cadaadiska iyo inaadan arkin kuwa aad jeceshahay muddo dheer markaad ka shaqaynayso guddiga. Haddii waxaas oo dhami kuu fiican yihiin, markaa ha seegin fursadda aad ku aragto dalabyada shaqada ee hadda jira iyada oo loo marayo xiriiriyahan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Maraakiibta Absolut » Noocyada doonyaha » Safarada raaxada » Fursad gaar ah, shaqo ka hel Disney Cruises
Socdaalka mawduuca: zombie oo arka (gudaha Ibiza)
Naples, Isbaanishka ugu badan magaalooyinka Talyaaniga